Mid ka mid ah Click soo dejiya Lugood Lyric - Kolkiiba dejinta Lyrics in Lugood
> Resource > Lugood > One Click inay dajiyaan Multiple Lyrics in Lugood
Ma rabtaa in aad aragto lyrics halka dhagaysiga muusigga? Maxay ku saabsan Cudarada lyrics ee files music si aad qaadan kartaa meel kasta? Habkani wuxuu ka caawin doonaa in ay sameeyaan labadaba. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay sidoo kale ka heli kartaa macluumaad kale sida artist, horyaalka, farshaxanka album oo dheeraad ah. Baro More >>
Wax kasta oo aad ku sugan tahay Mac ama Windows, waxaa jira lyrics badan oo la xidhiidha codsiyada (bixiyo oo lacag la'aan ah labadaba) si aad iyo lyrics bandhigay song. Laakiin waxaa jira codsiyo dhowr dajiyaan lyrics in Lugood in Dufcaddii . Waxaan baadhay internet iyo laba free Lugood lyrics soo dejiya ayaa la tijaabiyey in ay ka shaqeeyaan. Mid ka mid ah waxaa loogu talagalay Windows - Lugood Lyrics soo dejiya (iLyrics), kan kale waa u Mac - Hel Lyrical. Labada leeyahay fudud iyo dareen interface. Lugood More iyo iPod Software >>
Hel Lyrical - Lugood Lyrics soo dejiya u Mac
Tani soo dejiya lyrics lagu sheegay in auto-layaab dari lyrics in gabayo Lugood. Waxa dhabta ah sida sida loo soo bandhigay. By fudud mid click, Hel Lyrical dejinta lyrics in hadda song ciyaaro track oo xul ah ee hal ama ka badan heeso. Guji ka button indhaha si aad u eegto lyrics ee suuqa kala gooni ah. Hel Lyrical kale oo ay bixisaa badan hotkeys si ay u dhamaystiraan hawlaha. Download soo dejiya Lugood Lyric
Platform ogaan : Mac OS X 10.6 (Snow Leopard), Lugood 10.4 Mac.
Lugood More iyo iPod Software >>
1. Iyada oo tagging Active doorasho karti, taas Lugood lyrics soo dejiya si toos ah u soo ceshano lyrics online, laakiin ma overwrite doonaa lyrics haddii ay jiraan horeba ka jira.
2. Marka ay soo dejinta lyrics heesta hadda, ama xulashada 1 song, lyrics jira lagu bedelay.
3. Marka dejinta lyrics in xulashada ah in ka badan 1 song, haddii qaar ka mid ah waxay leeyihiin lyrics, Hel Lyrical weydiineysaa haddii uu u bedelo lyrics jira.
iLyrics - Lugood Lyrics soo dejiya for Windows
Waxaa jira dad badan oo soo dejiya Lugood lyrics soo baxay hareeraha loo yaqaan iLyrics, laakiin tani iLyrics run ahaantii ka shaqeeya. Laba database-ka mid yihiin Doorashadaada: LyricWiki ama Leo ayaa Lryics . iLyrics u baahan Lugood. Sidaas marka aad furto this soo dejiya lyrics, Lugood oo lagu gardaadin doonaa isku mid haddii Lugood ma furan. Dooranaysaa heesta raad aad rabto in aad buuxiso lyrics in Lugood iyo riix Hel Lyrics button in iLyrics. Waa su'aal doonaa server ka lyrics oo ku soo celi lyrics si aad u go'aansato update ama aan. Haddii " Cusboonaysii toos ah "doorasho la calaameeyay, idinka soo kaxayn doonaa lyrics iyo aad u updated waqti isku mid ah. Tani waa arrin aad u sahlan in ay dajiyaan badan oo lyrics in Lugood.
Hel nooca ugu dambeeya ee iLyrics (1.3) halkan.
Platform ogaan : Windows XP Professional, Lugood 10.4 Windows.